वीरगञ्जको सडक विस्तार अन्योलमा! के भन्छन मेयर,सडक विभाग,र के भन्छ कानून ? - Birgunj Sanjalवीरगञ्जको सडक विस्तार अन्योलमा! के भन्छन मेयर,सडक विभाग,र के भन्छ कानून ? - Birgunj Sanjalवीरगञ्जको सडक विस्तार अन्योलमा! के भन्छन मेयर,सडक विभाग,र के भन्छ कानून ? - Birgunj Sanjal
वीरगञ्जको सडक विस्तार अन्योलमा! के भन्छन मेयर,सडक विभाग,र के भन्छ कानून ?
३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०६:५५
वीरगञ्ज । सडक विभागले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको सडक अतिक्रमण हटाउने सूचना निकालेसँगै यो व्यापारिक शहरका बासिन्दामा एउटा चासो तीव्र गतिमा सञ्चार हुन्छ– के अब मुख्य सडक टुट्ने नै भयो त ? बितेका ५ वर्षमा ६ पटक यस्ता सूचना निस्किसकेका छन् । तर, वीरगञ्जमा सडक विस्तारको अन्योलले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन ।
अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । ‘छठ पर्वलगत्तै (१७ कात्तिक) देखि सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने सूचना निकालिएको थियो । तर, अब अदालतको अर्को आदेशको पर्खाइमा छौं,’ मिश्रले आर्थिक अभियानसित भने ।
यसअघि पनि यही सडकखण्डमा पर्ने परवानीपुरका बासिन्दाले मुआब्जा नदिएसम्म सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट हालेका थिए । क्षतिको लगत राखेर काम अघि बढाउन आदेश दिए पनि त्यहाँ सडक दाँयाँबायाँ २५/२५ मीटरमा पर्ने संरचना हटाइएको थियो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको प्रयास
वीरगञ्जको मुख्य बजारमा ५० मीटर सडक विस्तार गरेर सयौं मानिसलाई सडकमा ल्याउनु र संरचनाको विनाश गर्नु व्यावहारिक विकास नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया बताउँछन् । अबको केही समयमै वीरगञ्ज भन्सार पूर्णरूपमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)मा स्थानान्तरण हुने र त्यहाँदेखि परवानीपुरसम्म ६ लेनको सडक निर्माण भइरहेकाले मुख्य बजारमा ५० मीटर बाटो नचाहिँने अध्यक्ष केडियाको तर्क । ‘नगरको पूर्वतर्फ ६ लेनको बाईपास, इनरबाईपास र नगर विकासको ४० फिटको सडकले नगरक्षेत्रको आवागमन सहज हुने भएकाले मुख्य बजार क्षेत्रमा १५/१५ मीटर सडक पर्याप्त हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले २०३१ सालमा ल्याएको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको २५/२५ मीटर दायाँबायाँलाई सडक सीमा निर्धारण गरेको छ । ऐनले यो सीमाबाहेक ६/६ मीटर छोडेरमात्रै संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको ४० वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारका निकायहरूले वीरगञ्जमा सडक दायरामा पर्ने सम्पत्तिबाट कर र राजस्व असुल गरिरहेका छन् । सरकारले त्यतिबेलै मुख्य सडकखण्डका जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन पटकपटक सार्वजनिक सूचना गरेकोमा उनीहरू लिन नगएको बताइएको छ